योग्यता – मझेरी डट कम
त्यसैले उसलाई एक मनले त लाग्यो फोन नै नउठाऊँ तर त्यसो गर्नु अशिष्टता हुनसक्ने ठान्यो । ‘पक्कै कुनै काम लिनका लागि फोन गरेको हुनुपर्छू’ उसको मनले निष्कर्ष निकाल्यो । किनकि नेताहरुले कार्यकर्ताहरुलाई सम्झन कि चुनाव आउनु पर्छ कि त ब्यक्तिगत स्वार्थको कुनै काम पर्नु पर्छ । स्वार्थ नपरी नेताहरुले कार्यकर्ताहरुलाई सम्झदैनन् भन्ने उसलाई राम्ररी थाहा थियो ।
‘कतै राम्रै अवसर दिनलाई पो फोन गरेका हुन् कि ?’ उसको मन अलिकति लोभियो पनि । त्यो फोनले उसलाई खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहारजस्तै गरायो ।
दोधारमै उठायो फोन । उसले “हेल्लो” भन्नासाथ नेताज्यूले चिप्लो भाषामा भलाकुसारी सुरु गरे । आफूलाई थाहै नदिइ फर्केर गाउँ आएकोमा चित्त दुखाएजस्तो गरे । उसलाई भन्न मन थियो ‘अवसर आएका बेला योग्य र इमानदार कार्यकर्ताहरुलाई कहिल्यै सम्झनु हुन्न । अवसर आएका बेला आफ्नै आसेपासे चाटुकार र नातागोताहरुलाई प्राथमिकता दिएपछि पार्टीलाई हामी जस्ताको काम रहेनछ भनेर फर्केको ।’ तर उसको बोली घाँटीसम्म आएर पनि भित्रै अड्क्यो । भन्न सकेन ।
उसले भन्यो “शान्ति बहाली भइसकेको अवस्थामा बेकारमा किन शहर बसिराख्ने अब गाउँको सेवा गर्नुपर्छ भनेर फर्केको नि ।”
वास्तवमा उसलाई केन्द्रीयस्तरका कुनै पनि नेतासँग भेट्ने मन थिएन । तर आउँछु भनेर फोन नै गरिसकेपछि नआउनोस् भन्न सकेन । आफूभित्रको असुन्तुष्टिलाई दबाउँदै उसले स्वागतका लागि तयार भएको बतायो । सोध्यो “गाउँस्तरका कार्यकर्ताहरुलाई भेला गरेर एउटा स्वागत कार्यक्रम पनि राखौं कि ?”
“होइन त्यस्तो केही पनि पर्दैन । म अहिल्यै आउन लागेको तपाई घरमै बस्नु हुन्छ नि ।” नेताले भने । उसले सम्मति दियो ।
केन्द्रीयस्तरका नेता अचानक उसलाई भेट्न किन आउन लागे उसले अनेक तरहबाट ठम्याउने प्रयास गर्यो । तर सकेन । एकैछिनमा नेताज्यू आइपुगेपछि थाहा भइहाल्ने कुराका लागि ऊ धेरै बेर घोत्लिन चाहेन । तर पनि उसलाई खुल्दुली लागिरह्यो । श्रीमतीले भनिन् “चुनाव आउन लाग्दैछ, तपाईको योग्यता र इमानदारीलाई हेरेर कुनै अवसर दिन लाग्या हुन् कि ? ”
हुन त गाउँ फर्किनु अघि उसले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता नेताहरुलाई फर्काउन मन लागेको थियो । तर उसलाई श्रीमतीले सम्झाई- “आची पुछेर फालेको टालो काम लाग्न सक्छ भन्छन्, पार्टी सदस्यता जस्तो कुरो त्यतिकै किन खेर फाल्ने ? के थाहा भविश्यमा कुनै दिन काम आउन सक्छ कि ?”
अन्त्यमा उनले आफ्नो स्वाभावअनुसार लामो भूमिका बाँधे । अनि पार्टीले भावी चुनावको तयारीका लागि एकजना योग्य मान्छेको खोजी गरिरहेको र त्यो अभियान अन्तर्गत आफू पूर्वान्चलमा खटिएर आएको जानकारी दिए । अनि भने “जिल्लाका साथीहरुले भनेअनुसार तपाइँको गाउँमा जिल्लामै ख्याति कमाएका एकजना चौपाया चोरीका सरदार धर्मानन्दजी बस्छन् रे । म उनैलाई नै भेट्न आएको । तिनको घर कता पर्छ ?”
नेताज्यूको कुरा सुन्नासाथ एक्कासी दुई जोइपोइका आँखा जुधे । उनीहरुको अनुहारको भावले आश्चर्यमा परेको संकेत गर्दथ्यो । त्यो आश्चर्य र संकोचलाई उसले आफैंभित्र दबायो । झ्यालबाट बाहिर देखिएको गाउँ औल्याउँदै उसले भन्यो “उसको घर यही पल्लो गाउँमा हो । जिल्लामै बद्नामी कमाएको त्यो मान्छेसँग त्यस्तो के जरुरी पर्यो होला ?”
“अहिले हाम्रो पार्टीलाई त्यो मान्छेको अत्यन्तै खाँचो पर्यो ।” नेताज्यूले संक्षिप्त र अमूर्त भाषामा भने । अनि सोधे “औपचारिक कार्यक्रमहरुमा उनी मातृभाषा नबोलेर विदेशी भाषा बोल्न मनपराउँछन् रे हो ?”
उसले भन्यो “हजुरले उसका बारेमा सुन्नु भएको सही हो । तर त्यो मान्छे हजुरले भेट्न लायक चरित्रको मान्छे होइन । घरमा दुईदुईवटी श्रीमती हुँदाहुँदै अरुका छोरी बुहारी माथि आँखा लगाउने चरित्रहीन मान्छे हो । गाँजा तस्करीमा समातिएको मान्छे हो । त्यो मान्छेलाई हजुरले भेटेर गएपछि फेरि हाम्रो पार्टीको बारेमा जिल्लामा नकारात्मक चर्चा ……।”
उसको कुरा टुंगिन नपाउँदै नेताज्यूले कुरा काटे “त्यसको चिन्ता नगर्नुस् ।”
“केन्द्रमा एकसे एक इमानदार त्यागी मान्छेहरु हुँदाहुँदै यति बद्नाम मान्छेको खाँचो किन पर्यो होला ?” यसपटक उसले नेताहरुका सामुन्ने कुरा गर्दा प्रयोग गर्नै नमिल्ने कटाक्षशैली अपनायो । किनकि नेताहरु आफ्ना कार्यकर्ताहरुले जिज्ञासा राखेको भन्दा कमाराशैलीमा आदेश पालन गरेको मन पराउँछन् भन्ने उसलाई थाहा थियो ।
“यो कुरा म पछि बताउँला अहिलेलाई उसलाई भेटाइदिने काम चाहिँ गर्नुस् न” नेताज्यूले उसको कटाक्ष बुझेझै गरी हाकिमी शैलीमा आदेश गरे ।
तर पछिल्ला दिनमा मानिसहरु खुलेर आरोप लगाउन थालेका थिए । गाउँमा कसैको पशु चोरियो भने मानिसहरु सबैभन्दा पहिला ‘त्यही धर्मानन्देको काम हो’ भनेर शंका गर्थे । यद्यपि किटानी जाहेरी गर्ने आँट कसैसँग थिएन । किनकि ऊ गाउँ पन्चायतको प्रधानपन्च थियो । जिल्लाका एकसे एक नेता, सिडिओ डिएसपी र अन्चलाधिशसँग उसको सोझो सम्पर्क थियो ।
उसले चाहिँ रुदै बिन्ती गरिरह्यो- “मलाई माफ गरिदिनुस् आइन्दादेखि म यस्तो काम कहिल्यै गर्दिनू……” भनेर । पुलिसचौकीमा बुझाइएको केही दिनपछि धर्मानन्दे जेलबाट ससम्मान छुटेर पो आयो ।
त्यसबेला सुनिएको गाईगुई अनुसार “अराष्ट्रिय तत्वहरुले प्रतिशोध स्वरुप चोरीको अभियोग लगाएर कुटपिट गरे” भनेर उसकी कान्छी श्रीमतीले अन्चलाधिशसँग विन्ती गरिछ । अन्चलाधिशको सोझो आदेशमा छुटेको रहेछ । जे भए पनि ऊ पक्राउ परेको केही महिनासम्म चौपाया चोरी ठप्प भयो । मानिसहरुले शान्तिको श्वास फेर्न पाए । त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलन सुरु भयो र बहुदल आयो ।
धर्मानन्दको प्रजातान्त्रिक पार्टी प्रवेशले विरोधीहरुलाई प्रचारको मसला प्राप्त भयो । उनीहरुले २०४८ सालको आम चुनावमा प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई ‘गोरुचोरका सरदारहरुको पार्टी’ भनेर बद्नाम गरे । तर प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेताहरुले आलोचनालाई सुनेको नसुन्यै गरे । किनकि उनीहरुलाई भोट चाहिएको थियो । उसको पार्टी प्रवेशबाट आउने भोट पनि काटिन्छ भन्ने हेक्का उनीहरुलाई थिएन ।
धर्मानन्दले किन यसो गर्दैछ उसले केही पत्तो पाउन सकेन । उसले केही बोल्न नपाउँदै धर्मानन्दले भन्यो “म तपाईप्रति आजीवन ऋणी रहने छु । तपाईको यो गुन म कहिल्यै बिस्रने छैन ।”
“किन त्यस्तो के भयो र ?” उसले आश्चर्य प्रकट गर्यो । किनकि उसलाई भित्र के कुरा भयो भन्ने बारेमा केही थाहा थिएन ।
“ल तपाईलाई थाहा छैन ?” नेपोलियन शैलीको हँसिलो मुद्रामा धर्मानन्दले भन्यो “आउँदो चुनावमा म उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने भएँ नि ।”
उसले भित्र हेर्यो केन्द्रीय नेता ठूलै ऐतिहासिक उपलब्धी प्राप्त भएझै मुसुमुसु हाँसिरहेका थिएँ । नेताज्यूले भित्रैबाट गर्वसाथ भने “हाम्रो पार्टीले विगतको नजिरलाई निरन्तरता दिनु पनि त पर्यो नि ।”